DAAWO VIDEO: Pakistan Iyo Turkiga oo Ku Dhawaaqay Awood Military Aduunka islaamka Lagu Ilaaliyo - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO: Pakistan Iyo Turkiga oo Ku Dhawaaqay Awood Military Aduunka islaamka Lagu Ilaaliyo
Turkiga iyo Pakistan waxay iska kaashadaan dhinacyo badan oo kala geddisan, ayuu yidhi Akar wasiirka Difaaca ee Turkiga, isagoo intaas ku daray: “Dadka reer Pakistan, taageeradooda aan la soo koobi karin ee aynnu qaadnay xilligii aan ku jirnay dagaalladeenna xorriyadda, waxay meel gaar ah ku leeyihiin qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna.
Markabka Heerka Sadeexaad ee Awooda ee MILGEM uu Turkigu ka iibiyey Pakistan , Axaddii xaflad ay ka soo qayb galeen saraakiisha ugu sareysa difaaca ee labada dal.oo Lagu Qabtay Pakistan.
Mashruuca Dhisida Maraakiibta MILGEM, oo ay fulisay shirkadda ASFAT ee Wasaaradda Difaaca Qaranka Turkiga , Turkiga Ayaa Wada Afar Markab oo uu u Dhisayo dalka Pakistaan . Mashruucu wuxuu matalaa dhoofinta ugu weyn ee warshadaha difaaca Turkiga ee kobcaya.
Xafladda xarig jarka ayaa lagu qabtay barxadda markabka ee xarunta dhaqaalaha Pakistan ee Karachi oo ku taal xeebta Badda, iyadoo Wasiirka Difaaca Qaranka Turkiga Hulusi Akar iyo Wasiirka Difaaca Pakistan Zubaida Jalal Khan ay goobjoog ahaayeen.
Isaga oo ka hadlaya xaflada, Akar wuxuu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay joogitaankiisa Pakistan wuxuuna hoosta ka xarriiqay in xiriirka “wanaagsan” ee labada dal uu ahaa mid gaar ah taariikhdooda dheer darteed.
Ankara iyo Islamabad waxay iska kaashadaan dhinacyo badan oo kala geddisan, ayuu yidhi Akar, isaga oo intaas ku daray: “ Dadka Turkiga waligood ma iloobi doonaan deeqsinimada dadka Pakistan ee aan marwalba wada joogno labadaba waqtiyada wanaagsan iyo kuwa xunba.
“Aad ayey noogu macno iyo qiimo badan tahay inaan aragno taas, maanta, inaad sidoo kale garab taagan tihiin Turkiyiinta Azerbaijan. Turkiga marwalba wuxuu garab taagnaa qadiyada saxda ah ee Pakistan ee Kashmir wuuna sii wadi doonaa sidaas.
Wasiirka Difaaca Paksitaan Zubaida Jalal Khan Dhinaceeda, waxay u mahadcelisay Akar, iyo sidoo kale ASFAT, iyo dhamaan dadka kale ee wax ku darsaday mashruuca MILGEM.
Mashruuca MILGEM ayaa had iyo jeer lagu xasuusan doonaa inuu astaan ​​u yahay saaxiibtinimada Turkiga iyo Pakistan, ayay tiri, iyadoo ammaantay walaaltinimada labada dal.
Maraakiibta Corvettes ayaa soo bandhigi doona dareemayaal casri ah iyo aaladaha hubka ee ugu horumarsan, ciidamada badda ee Pakistan ayaa ku yiri barta Twitter-ka.
Waxay gacan ka geysan doonaan “ilaalinta nabadda, amniga & isu dheellitirka awoodda” ee Badweynta Hindiya, ayay hoosta ka xariiqday.Paksitaan.
Turkiga Ayaa ka Caawinaya Paksitaan Awoodaha Hubka Iyo Dhismaha Maraakiibta Halka Pakistan Turkiga Siweyn Uga Caawinayso Inay Hesho Awood Nuclear,Iyadoo Khibrada Pakistaan ee Nuclearka tahay Mid saraysa.
Colaadda Armenia iyo Azerbaijan
Isaga oo carabka ku adkeeyay in gobolka iyo adduun weynaha islaamka ay marayaan waqtiyo adag, Akar waxa uu cambaareeyay waxa uu ku sheegay munaafaqnimada iyo laba jibaarnaanta ay dalalka qaar ka helaan dhibaatooyinka bani’aadamnimo ee ka jira gobollada muslimiinta.
“Pakistan iyo Turkiga iskama indha tirayn masiibooyinka aadanaha ee ka jira gobolladooda iyo adduunka oo dhan. Kama aysan aamusi jirin hadda wixii ka soo kordhay Azerbaijan. Waxaan rabaa inaan cadeeyo markale, ilaa iyo dhamaadka, waxaan taageersanahay halganka Azerbaijan ee ku aadan soo celinta dhulalkeeda oo ay gacanta ku hayeen in ka badan 30 sano Armenia . ”
Isaga oo ku amaanaya ugana mahadcelinaya Pakistan taageerada ay siisay Azerbaijan, Akar wuxuu sheegay in Armenia ay masuul ka noqon doonto taariikhda iyo sharciga caalamiga hortooda dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo dambiyada dagaal ee ay gashay.
“wadamada Aduunka waa inay fahmaan in nabad waarta iyo xasillooni lagu gaari karo oo keliya markii Armenia ay ka baxdo dhulalka Azerbaijan, oo ay la wareegayso,” ayuu yiri.
Isbadalkii ugu dambeeyay wuxuu cadeeyay baahida loo qabo midnimo xoogan oo ka dhexjirta Muslimiinta, ayuu yiri Akar, isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la helo xoogag hubaysan oo wax ku ool ah.
Isaga oo tixgelinaya tayada warshadaha gaashaandhigga ee Turkiga, ayuu sheegay in Turkigu uu horumar ballaaran ka sameeyey dhinacyo badan, taasna ay ugu mahadcelinayaan hoggaanka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Akar ayaa ku celceliyay in toddobo shirkadood oo Turki ah ay ka mid ahaayeen 100-ka shirkadood ee difaaca ugu waaweyn adduunka, wuxuuna intaas ku daray in Turkigu ku faraxsan yahay inuu aqoontiisa la wadaago Pakistan.
Ciidanka Badda Pakistan ayaa qandaraas la saxiixday ASFAT bishii Luulyo 2018 si ay u helaan afar markab oo nooca MILGEM ah.
Bishii Oktoobar 2019, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo uu weheliyo taliyaha ciidamada badda ee Pakistan Adm. Zafar Mahmood Abbasi, ayaa Furay Iskaashiga Warshadaha Labada dal, intii lagu guda jiray xaflad ka dhacday Istanbul.
Turkiga ayaa kamid ah 10-ka dal ee dhisi kara, qaabeyn kara isla markaana dayactiri kara maraakiibta dagaalka iyagoo adeegsanaya awoodaha gudaha.
Ka dib xafladda, Akar iyo dhiggiisa Pakistan waxay yeesheen kulan ay uga wada hadlayaan suurtagalnimada iskaashi dheeri ah ee dhinaca difaaca iyo arrimaha labada dhinac iyo kan gobolka.